के तपाई अर्को विश्व मार्चमा भाग लिन चाहनुहुन्छ? - विश्व मार्च
के तपाइँ अर्को विश्व मार्चमा भाग लिन चाहनुहुन्छ?
घर » के तपाइँ अर्को विश्व मार्चमा भाग लिन चाहनुहुन्छ?
शान्ति र असहमतिको लागि विश्व मार्च एक सामाजिक आन्दोलन हो जुन दोस्रो22019 मा यात्रा गर्नेछ। पहिलो विश्व मार्च 2009 वर्षमा आयोजित भएको थियो र तिनीहरू प्रचार गर्न सक्षम थिए 400 शहरहरू भन्दा बढीमा एक हजार घटनाहरु। दोस्रो विश्व मार्चमा एक ठूलो मील का पत्थर तपाईं फेरि पुग्न चाहानुहुन्छ।
शान्ति र असहमतिको लागि विश्व मार्च एक मानववादी दृष्टि संग सामूहिक बिरुद्ध, विश्वभर फैलिएको, एक सामान्य लक्ष्य संग विश्व र समाज शान्ति को आवश्यकता को बारे मा जागरूकता को बढावा र शांति र अहिंसा मा ।
र यसको लागि यो आवश्यक छ कि नयाँ प्रतिभाहरू यो नयाँ पहलमा सामेल हुनुहोस्। यदि तपाइँ तिनीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ र हामीलाई अझ राम्रो जान्न चाहानुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई वेब ब्राउज गर्न आमन्त्रित गर्दछौं, यसका विभिन्न लेखहरू पढ्नका लागि।
हामी कुन प्रकारको सहभागिता खोज्छौं?
शान्ति र नवीनताको लागि मार्च मार्चदेखि, हामी कुनै पनि इकाई, सामूहिक संस्था वा पनि व्यक्तिगत व्यक्तिको लागि खुला छौँ जुन संसारको कुनैपनि ठाउँबाट यो सहयोगको साथ सहयोग गर्न चाहन्छौं। माथि उल्लेखित रूपमा, मार्च2को अक्टोबरको 2019 सुरु हुनेछ र संसारभर जान्छ, 8 को मार्च 2020 बन्द।
यस सहभागी पहल संग हामी यो आशय छ कि यस आन्दोलन संग प्रतिबिम्बित व्यक्तियों या संघहरु, दौरे को दौरे मा समानांतर गतिविधिहरु को निर्माण गरेर उत्सव मा शामिल हो।
सबै क्रियाकलाप र क्रियाकलापहरू गैर-लाभकारी छन्, जुन त्यहाँ कुनै आर्थिक प्रोत्साहन छैन, र कार्यान्वयन आफैंमा चलिरहेको हुनुपर्छ।
हामी खोजिरहेका छौं सङ्गठन र व्यक्तिहरूलाई कारणको लागि प्रतिबद्ध र जो भाग लिन चाहानुहुन्छ र आयोजकहरु संग प्रत्यक्ष संचार को एक लाइन बनाइन्छ।
विकास गरिएका गतिविधिहरू पर्याप्त मात्रामा व्यक्तिहरू (बच्चाहरू वा वयस्कहरू) सँगसँगै ल्याउनको निम्ति प्रचारित हुनुपर्छ। कम्तिमा 20 प्रतिभाशाली आदर्श.
यदि तपाईं भाग लिन चाहानुहुन्छ, तर तपाइँसँग कुनै विशिष्ट गतिविधिको विचार छैन, हामी तपाईंलाई के गर्न सकिन्छ को केहि उदाहरणहरू सुझाव गर्न सम्पर्क गर्नेछौं। तर प्रस्तावहरू पनि विस्तारित र पूर्ण रूपमा कार्यको लागि जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा बनाईएको हुन सक्छ जबसम्म तिनीहरू मार्चको मानहरूको ढाँचा भित्र छन्।
तपाईंलाई एक दिन चयन गर्न सोधिएको छ जुन बाटबाट जान्छ2देखि अक्टोबर देखि 2019 देखि 8 सम्म मार्च को 2020 सम्म, छनौट गरिएको गतिविधि विस्तृत गर्न र यो हो कि ग्लोबल मार्चको भाग हुन सक्छ। हामीले सहमत छुएको मितिमा, गतिविधि मुख्य मार्चको भाग हुनेछ, वा माध्यमिक मार्चको अंश हुन सक्छ।
एकपटक दर्ता भएपछि तपाईले निर्दिष्ट गर्नुभएको ईमेल ठेगानामा ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमा हामी थप जानकारी प्रदान गर्नेछौं, र सफलतापूर्वक गतिविधि पूरा गर्न आवश्यक जानकारी सङ्कलन गर्न प्रयास गर्नेछौं।
यो सधैं महत्त्वपूर्ण छ कि एक भिजुअल समर्थन सामाग्री (तस्बिरहरू वा भिडियोहरू), ताकि तिनीहरू वेब र संगठनको सोशल सञ्जालहरूमा साझेदारी गर्न सकिन्छ, यसैले यो ऐतिहासिक दिनको रेकर्ड सिर्जना गर्न सक्दछ।
आन्दोलन कसरी गर्ने?
ती सबै व्यक्ति वा सङ्गठन जसले स्वयंलाई इच्छा गर्न चाहन्छन् जुन मार्चको अन्तिम दिनमा साना घटनाहरू वा क्रियाकलापहरू सिर्जना गर्न, यो सहभागी बटनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ र तपाईंको डेटा छोड्नको लागि ताकि हामी इमेल मार्फत तपाइँलाई सम्पर्क गर्न सक्दछौं, त्यसैले हामी निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ हामी गतिविधिहरूको बारेमा केही विचारहरू सुझाव गर्न सक्छौं।
उठो र यो सामेल हुनुहोस् आन्दोलन!
हामीलाई तपाइँको सहभागी डेटा छोड्नुहोस्
नयाँ गियर प्रक्षेपण सम्म अस्थायी रूपमा असक्षम। यदि तपाइँसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने तपाइँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ info@theworldmarch.org